Luka 23 | IBhayibhile Kwi-Intanethi | INguqulelo Yehlabathi Elitsha
23 Ngoko inkitha yabo yesuka, iyonke, yamsa kuPilato.+ 2 Ngoko bammangalela,+ besithi: “Lo mntu simfumene ebhukuqa+ uhlanga lwethu, ekwalela ukuhlawulwa kwerhafu+ kuKesare, esithi yena unguKristu ukumkani.”+ 3 UPilato wambuza lo mbuzo: “Unguye na ukumkani wamaYuda?” Wamphendula wathi: “Nawe ngokwakho utsho njalo.”+ 4 Ngoko uPilato wathi kubabingeleli abaziintloko nezihlwele: “Andifumani lwaphulo-mthetho kulo mntu.”+ 5 Kodwa bazingisa, besithi: “Uxhokonxa abantu ngokufundisa kulo lonke elakwaYuda, ukususela eGalili ukuza kutsho apha.” 6 Akukuva oko, uPilato wabuza enoba lo mntu wayengumGalili kusini na, 7 yaye, emva kokuqinisekisa ukuba wayevela kubukhosi bukaHerode, wamthumela kuHerode,+ owayeseYerusalem naye ngaloo mihla. 8 Ke kaloku uHerode, akumbona uYesu waba nemihlali kakhulu, kuba kwakukudala efuna ukumbona+ ngenxa yokuba evile+ ngaye, yaye wayethembe ukumbona esenza umqondiso othile. 9 Waqalisa ke ukumbuza ngamazwi amaninzi; kodwa akazange amphendule.+ 10 Bema ke ababingeleli abaziintloko nababhali, bemmangalela kabukhali.+ 11 Ke uHerode nabalindi bakhe abangamajoni bamthoba isidima,+ wahlekisa+ ngaye ngokumambesa ngesambatho esiqaqambileyo waza wamthumela kwakhona kuPilato. 12 UHerode noPilato+ baba ngabahlobo kanye ngaloo mini; kuba ngaphambi koko babeziintshaba. 13 Ngoko uPilato wabiza ababingeleli abaziintloko nabalawuli nabantu 14 waza wathi kubo: “Nizise lo mntu kum nisithi uvuselela abantu ukuba bavukele, yaye, khangelani! ndimncinile phambi kwenu kodwa kulo mntu andifumananga sizathu+ sezimangalo enizizisa ngokunxamnye naye. 15 Enyanisweni, noHerode akasifumananga, kuba umthumele kuthi kwakhona; kwaye, khangelani! akukho nto ayenzileyo ingabangela ukuba afe.+ 16 Ngoko ke ndiza kumbetha+ ndize ndimkhulule.” 17 —— 18 Kodwa loo nkitha yabo iphela yadanduluka, isithi: “Msuse lo,+ usikhululele uBharabhas!”+ 19 (Umntu lowo wayephoswe entolongweni ngenxa yesiphendu esithile esathi sabakho esixekweni nangenxa yokubulala.) 20 Kwakhona uPilato wamemeza kubo, ngenxa yokuba wayefuna ukukhulula uYesu.+ 21 Ngoko badanduluka, besithi: “Bethelela! Mbethelele!”+ 22 Isihlandlo sesithathu wathi kubo: “Ngoba, yintoni embi ayenzileyo lo mntu? Andifumananga nto ingabangela ukuba afe; Ngoko ke ndiza kumbetha ndize ndimkhulule.”+ 23 Ngako oko bamxina, ngamazwi amakhulu, befuna ukuba abethelelwe; yaye amazwi abo oyisa.+ 24 Ngoko uPilato wagweba ngelithi makwenziwe oko bakufunayo:+ 25 wakhulula+ umntu owayephoswe entolongweni ngenxa yesiphendu nokubulala nalowo babemfuna, kodwa wanikezela ngoYesu ekuthandeni kwabo.+ 26 Ke kaloku njengoko babemqhuba, babamba uSimon, oyinzalelwane yaseKirene, owayevela emaphandleni, baza basibeka phezu kwakhe isibonda sentuthumbo ukuba asithwale emva koYesu.+ 27 Kodwa wayelandelwa yinkitha enkulu yabantu neyabafazi ababezimbambazela besentlungwini yaye bemenzela isijwili. 28 UYesu waphethukela ebafazini abo waza wathi: “Zintombi zaseYerusalem, musani ukulilela mna. Kunoko, zilileleni nina nabantwana benu;+ 29 kuba, khangelani! kuza imihla abaya kuthi ngayo abantu, ‘Banoyolo abafazi abaziindlolo, nezibeleko ezingazange zizale namabele angazange ancancise!’+ 30 Baya kwandula ke bathi ezintabeni, ‘Siweleni!’ nasezindulini, ‘Sigubungeleni!’+ 31 Ngenxa yokuba ukuba benza ezi zinto xa umthi ufumile, kobeka phi na ke xa womile?”+ 32 Kodwa nabanye abantu ababini, abenzi-bubi, babeqhutywa besiya kubulawa kunye naye.+ 33 Kwaye bakufika kwindawo ebizwa ngokuba yeyoKakayi,+ bambethelela yena nabenzi-bubi, omnye ngasekunene kwakhe nomnye ngasekhohlo kwakhe.+ 34 [[Kodwa uYesu wayesithi: “Bawo, baxolele,+ kuba abakwazi oko bakwenzayo.”]] Ngapha koko, ukuze babelane ngeengubo zakhe, benza amaqashiso.+ 35 Kwaye abantu bema bekhangele.+ Kodwa abalawuli babemsinekela, besithi: “Wabasindisa abanye; makazisindise+ naye, ukuba unguKRISTU kaThixo, Lowo Unyuliweyo.”+ 36 Namajoni ayehlekisa+ ngaye, esondela kuye aze amnike iwayini emuncu+ 37 esithi: “Ukuba ungukumkani wamaYuda, zisindise.” 38 Phezu kwakhe kwakukwakho nombhalo othi: “Lo ngukumkani wamaYuda.”+ 39 Kodwa omnye wabenzi-bubi ababexhonyiwe wamtshabhisa+ esithi: “UnguKRISTU, akunjalo? Zisindise wena nathi.” 40 Ekuphenduleni omnye wamkhalimela wathi: “Akumoyiki na wena uThixo, ekubeni nawe ukulo mgwebo ufanayo?+ 41 Thina sigwetywe ngokusesikweni, kuba samkela ngokupheleleyo oko kusifaneleyo ngezinto esizenzileyo; kodwa lo mntu akenzanga nto iphume endleleni.”+ 42 Kwaye wahlabela mgama wathi: “Yesu, uze undikhumbule xa uthe wangena ebukumkanini bakho.”+ 43 Waza yena wathi kuye: “Inene ndithi kuwe namhlanje, Uya kuba nam+ eParadesi.”+ 44 Ke kaloku, kwakumalunga nelixa lesithandathu, ukanti kwabakho ubumnyama phezu kwawo wonke umhlaba de kwalilixa lesithoba,+ 45 ngenxa yokuba ukukhanya kwelanga kwafiphala; landula ke ikhuselo+ lengcwele lakrazuka phakathi.+ 46 Yaye uYesu wabiza ngelizwi elikhulu wathi: “Bawo, ndiwuyekela ezandleni zakho umoya wam.”+ Akuba etshilo, wabhubha.+ 47 Ngenxa yokubona oko kwenzekayo igosa lomkhosi lamzukisa uThixo, lisithi: “Ngokwenene lo mntu ubelilungisa.”+ 48 Yaye zonke izihlwele ezazihlanganisene kuloo mbono, zakukubona oko kwenzekileyo, zabuya, zizibetha izifuba. 49 Ngaphezu koko, bonke ababeqhelene naye babemele mgama.+ Kanjalo, nabafazi abamlandelayo ukususela eGalili, babemile bezibona ezi zinto.+ 50 Yaye, khangela! kwakukho indoda egama linguYosefu, eyayililungu leBhunga, iyindoda elungileyo nelilungisa+— 51 yona yayingavotelanga ukuxhasa icebo nesenzo sabo+—yayiyeyaseArimathiya, isixeko samaYuda, kwaye yayilindele ubukumkani bukaThixo;+ 52 yona ke yaya kuPilato yaza yacela umzimba kaYesu.+ 53 Yawothula,+ yawusongela ngelinen ecikizekileyo yaza wawubeka engcwabeni+ elalixholwe eliweni, ekwakungazange kulale mntu kulo.+ 54 Leyo yayiyimini yokuLungiselela,+ nokukhanya kwangokuhlwa kwesabatha+ kwakusondela. 55 Kodwa abafazi, ababeze kunye naye ukusuka eGalili, balandela, balikhangela ingcwaba lenkumbulo+ nendlela owawubekwe ngayo umzimba wakhe;+ 56 baza babuya, balungisa iziqholo neeoli zobulawu.+ Kodwa baphumla ngesabatha+ ngokomyalelo.